Tsy misy intsony Innocence - Boys Love - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Tsy misy intsony ny Innocence Average 2.5 / 5 avy amin'ny 2
N / A, manana fomba fijery 12.9K
Comedy, tantara an-tsehatra, Manhwa, Romance, Yaoi
Raha esorinao ny lobaka misy takelaka sy solomaso matevina matevina eo an-dohany, dia mahazo lehilahy tanora tsara tarehy sy tanora ianao ?! Ilay be krizy Ethan dia raiki-pitia tamin'i Dwayne tao amin'ny prom an'ny fianarany tany amin'ny lisea. Tsy misy fandrosoana mandritra ny 4 taona, Ethan dia tafaraka amin'i Dwayne tamin'ny antoko diplaomany. Dwayne, tsy niraharaha an'i Ethan izay nanangona ny herim-pony hiresaka taminy, dia nahatsapa zavatra mafy nisavoana ny tanany teo am-pandehanana ilay zazalahy nampitebiteby azy. Manana zavatra mahatalanjona ity lehilahy ity…!
"Ianao .. te-hanao zavatra mahafinaritra miaraka amiko ve ianao?"
Inona no hitranga amin'ilay zazalahy nerdy, Ethan?
Afaka mahita olona maro ianao mangaupdates, tranokala manga
Chapter 22 Jolay 23, 2021
Chapter 21 Jolay 23, 2021
Chapter 20 Jolay 23, 2021
Chapter 19 Jolay 23, 2021
Chapter 18 Jolay 23, 2021
Chapter 17 Jolay 23, 2021
Chapter 16 Jolay 23, 2021
Chapter 15 Jolay 23, 2021
Chapter 14 Jolay 23, 2021
Chapter 13 Jolay 23, 2021
Chapter 12 Jolay 23, 2021
Chapter 11 Jolay 23, 2021
Chapter 10 Jolay 23, 2021
Chapter 9 Jolay 23, 2021
Chapter 8 Jolay 23, 2021
Chapter 7 Jolay 23, 2021
Chapter 6 Jolay 23, 2021
Chapter 5 Jolay 23, 2021
Chapter 4 Jolay 23, 2021
Chapter 3 Jolay 23, 2021
Chapter 2 Jolay 23, 2021
Chapter 1 Jolay 23, 2021